शान्ता मरासिनी - कान्तिपुर समाचार
‘मेयर अर्थात पुरुषसँगै चुनाव जितेर आयौं तर म शरणर्थीजस्तै भएकी छु,’ यो भनाइ इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला नेम्बाङको हो । दक्षिण अफ्रिकी प्रशिक्षकहरू सम्मिलित संघीयता कार्यान्वयन क्षमता विकास तालिम लिइरहेका प्रदेश २ का स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरूबीच यसबारे गफ हुँदै थियो ।
शान्ता मरासिनीका लेखहरु :
रमेश निरौला भाद्र २८, २०७६
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरी कान्तिपुरलाई राजधानी बनाएपछि बसन्तपुर दरबारमा लिखित सामग्रीको संकलन जोगाड गरिदिएका थिए । त्यो नै आधुनिक नेपाल राज्यको पुस्तकालय संकलनको प्राचीन रूप थियो ।...
रमेश के.सी. भाद्र २८, २०७६
नयाँ शीतयुद्ध ? हो, चीन र अमेरिकाबीच अहिले व्यापार र प्रविधिको विषयलाई लिएर नयाँ शीतयुद्ध चलिरहेको छ । पहिलेको जस्तो यो शीतयुद्ध वैचारिक छैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुँजीवादी...
उमा भण्डारी भाद्र २८, २०७६
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक/डेढ महिनादेखि नै विद्यालयले परीक्षा लिन सुरु गर्छ । अनि सुरु हुन्छ, विद्यार्थी र अविभावकको तनाव खेप्ने दिन । कतिपय परिवारमा आमाबाबु...
विमल निभा भाद्र २८, २०७६
नेपाली साहित्यमा गंगाको व्यापक प्रभाव छ । यसलाई अझ प्रस्टसँग भन्ने हो भने गंगा याने गंगाप्रसादहरूकै कारण हालको साहित्य चलायमान रहेको छ भने पनि कुनै अतिशयोक्ति...
कृष्णप्रसाद भुसाल भाद्र २८, २०७६
नामले सिकारी चरा भए पनि गिद्धले कहिल्यै सिकार गर्दैन । केवल मरेका जनावरको मासु अर्थात सिनो खाएर वातावरण स्वच्छ, सफा र सन्तुलित राख्छ । यस हिसाबले गिद्ध...